Maalinta: 29-ka July, 2015
Shirkadaha Turkiga ayaa sidoo kale ka qaybqaatay dhismaha khadka cusub ee Oman
Shirkadaha Turkiga ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya dhismaha xaruntan cusub ee Cumaan: Sida laga soo xigtay ilaha Cumaan, badhanka waxaa lagu cadaadiyey in laga dhiso khad cusub oo u dhexeeya dekada Sohar iyo Buraimi. Shaqada dhismaha khadka taas [More ...]
Barcelona Suburb ayaa ballaarisay
Nawaaxiga xaafada Barcelona ee la balaariyey: khadka tareenka ee dheeraadka ah ee Barcelona ayaa la galiyay xafladii furitaanka ee uu qabtay wadaadka tareenka gobolka FGC ee Catalonia. Dhererka xariiqda waa 4 km iyo ballaca tareenka waa 1435 mm. Barcelona [More ...]
Bochum-Gelsenkirchen Trams Dib u hagaajin Jarmalka
Gawaarida Bochum-Gelsenkirchen ayaa laga cusbooneysiinayaa Jarmalka: Jarmalka gudaheeda, shirkadda ka shaqeysa taraafikada Bochestra-Gelsenkirchen Bogestra iyo Stadler waxay ku heshiiyeen wax walba oo lagu amro taraamyada taraamka. Sida ku xusan heshiiska, Bogestra wuxuu adeegsan doonaa 42 [More ...]
Gegada Diyaaradaha Luton ee London si toos ah ayaa loo cadaadiyey Button: Caasimadda London ee Ingriiska Madaarka Luton waxaa si toos ah loogu xiri doonaa khadka dhexe ee magaalada. Yaraynta waqtiga gaadiidku ka imanayo badhtamaha magaalada iyo gegada diyaaradaha oo la dhammaystiray xariiqa illaa 20 min [More ...]
Machadka Tikidhada Caanka ah ee Tartanka Adduunka oo la cusbooneysiiyay Peru
Qadka caanka ah 'World Train Macho' ee Peru in la cusbooneysiisto: Dallada Peruvian iyo hay'adda maal gashiga gaarka ah ee loo yaqaan 'Proinversion' waxay ku dhawaaqday inay daneynayaan dayactirka iyo hagaajinta khadka 128,7 km Huancayo-Huancavelica. 24 ayaa ku dhawaaqay bishii Luulyo [More ...]
Luxembourg waxay saxeexday qandaraas cusub oo loogu talo galay Khadadka Tram-ka cusub: Maareeyaha taraamka magaalada Luxembourg Luxtram wuxuu ka heli doonaa taageero shirkadaha kala duwan ee 3 heshiiska la saxeexay. 3 ayaa dabooli doonta muddo hal sano ah heshiis Transdev, Transama iyo [More ...]
Turkiga Yurub ahaayeen buundooyinka ugu faraxsanahay inaan Turkey
Yurub oo soo socda inuu Turkey Turkiga ayaa ku faraxsan buundooyinka: fasaxa sanadlaha ah gawaarida ay la Yurub socda dalka Turkiga si ay ku qaataan dalka Turkiga, Turkiga waxay ahaayeen buundooyinka faraxsanahay. badbaaday Qasaarooyinka Yurub ee xoogga la kulmay Kapıkule iridda caadooyinka iridda neefta Turkey [More ...]
Qalabka ALCER Karşıyaka iyo Konak Trams
Qalabka ALCER Karşıyaka iyo Konak Tramways: ALCER waxay soo saartaa tas-hiilaad baabuur oo loogu talagalay nadiifinta dusha sare ee tareenka, taraamka iyo gawaarida tareenka. Waa lagama maarmaan in la nadiifiyo sagxadaha gawaarida [More ...]
Ha la yiraahdo Bridge Bridge waxaa loo yaqaan 'Evliya Celebi'
Bridge Bridge 'Evliya Celebi' waa in loogu yeedhaa: Duqa magaalada Altinova Metin Oral, dhismaha buundada socota ee loo yaqaan 'Gulf Crossing Bridge' si loogu bixiyo magaca safarka caanka ah Evliya Çelebi ayaa sheegay inay bilaabi doonaan olole. Afka, AA [More ...]
RayHaber 29.07.2015 Warbixinta Shirka
Cusboonaysiinta Shirkadda Afyon Guest House ANKARAY Plant Traction Motor Burush Brush Holder iyo Burush Holder Mechanism Mechanism waxaa la iibsan doonaa IP Camera waxaa lagu iibsan doonaa Nidaamka kamaradaha amniga ayaa la iibsan doonaa
Jimicsi lagu sameeyo Ankara Kecioren Cable Car: Degmada Kecioren, 'Tababbarka Shaqada Caafimaadka iyo Badbaadada Aasaasiga ah' wuxuu sii waday tababbarka la siiyay magaca tababbarka fekerka ah ee la siiyo halista ay wajahayaan shaqaalaha. Badbaadada shaqadda oo leh xeerarka oo dhan [More ...]
Tallaabooyinka amniga ayaa lagu soo kordhiyay wadooyinka magaalada Ankara: Agaasinka guud ee Amniga Gobolka 81 ee 'warqad digniin' ka dib markii waaxda booliska Ankara ay cabsi ka muujisay caasimada. Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara, Ankaray iyo Khadadka Magaalada [More ...]
Dawladda hoose ee Istanbul Üsküdar waxay bayaan ka soo saartay mitrooga: Istanbul Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro line, oo bayaan ka soo saaray shaqada degmada Üsküdar, ayaa sheegtay in mashruucu uusan laheyn wax waajibaad ah, awood iyo xilal. Degmada Üsküdar, dhismaha ongoingsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe [More ...]
Live Music on Tram ee Antalya (Video)
Muusig toos ah oo saaran wadada Tram ee Antalya: Farshaxanadayaasha wadooyinka dhaadheer ee qaaday xalay Antalya ayaa siiyay rakaabka waqtiyo raaxo leh oo ay la socdaan heeso Badda Madoow oo ay la socdaan aaladooda. Tareenka ugu dambeeya ee Antalya xalay [More ...]
Asphalt Metrobüs line ayaa bilaabay shaqada dayactirka
Howlaha dib u cusboonaysiinta ee loo yaqaan "Asphalt Line asphalt" shaqooyinka dib ayaa loo bilaabay: Howlaha cusboonaysiinta ee loo yaqaan "Asphalt" waxaa la bilaabay in lagu kordhiyo raaxada raacitaanka iyo in la helo wadis aad u raaxo badan khadka khadka tareenka. Sida laga soo xigtay Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, asphalt [More ...]
Daraasada Asphalt waxay ka bilaabantaa Erciyes Road Road Road Road
Erciyes Ski Xarunta Jidka Asphalt Work bilaabaa: Kayseri, mid ka mid ah xarumaha dalxiiska muhiim ugu Turkey iyo si wadajir ah ula dhamaystirka maal-gelinaya dhismaha waddooyinka in bixiyaan helitaanka Ski Center Erciyes bilaabay shaqo on laami ah. Kayseri [More ...]
Tareenada iyo maraakiibta waxay hadda la shaqeeyaan gaaska dabiiciga ah
Tareennada iyo maraakiibta ma sii shaqeyn doonaan gaaska dabiiciga ah: Haa ma akhrin khalad. Gaaska dabiiciga ee isku buuqsan (CNG) iyo naaska gaaska dabiiciga ah oo ay weheliso matoorrada naaftada ee tareenka iyo maraakiibta iyada oo ay ku jirto baaxadda shaqada ay bilowdey Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta. [More ...]
Taariikhda tareenka ee Istanbul
Taariikhda taraamka ee Istanbul: Waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee gaadiidka dadweynaha ee magaalooyinka, taraamyada waxaa loo adeegsadaa Ameerika (Brodway) 1852, France (Paris) ee 1855 iyo ku soo kordha magaalooyinka kale ee Yurub. Tram oo ku yaal Istanbul [More ...]
Dhismaha Tram Construction wuxuu ku socdaa waddada
Karşıyaka iyo khadadka tareenka ee Konak, Ankara oo fadhigeedu yahay Ankara Gümmak waxaa loo xushay inuu qandaraasle u noqdo dhismaha forzmir tramway iyo gaadiidka. 26 Febraayo 2014 waxay aruurisay laba taraam oo kala duwan [More ...]
Ogeysiiska Qandaraaska: Cusboonaysiinta jidadka socodka ee shaqaalaheeda kala duwan ee tiknoolajiyada kala duwan ee TÜLOMSAŞ iyo xaqiijinta badbaadada shaqaalaha ee dhererka
TÜLOMSAŞ GUULKA GUUD EE TÜLOMSAŞ dib u cusbooneysiinta shaqaalaha socodsiinta ee wadooyinka kaladuwan iyo hubinta amniga shaqada ee dusha sare [More ...]
Turkey tareenka iyo Engine sec. Shaqada wadooyinka tareenka ee TusLOMSAŞ waxaa la sameyn doonaa MADAXWEYNE SIILAANYO IYO ISSUES OO KU SAABSAN KU SAABSAN SHAQADA QODOBKA 1 - Macluumaadka Maamulka 1.1. Maamulka; a) Magaca: qandaraasle tareenka Turkey [More ...]
Ogeysiiska Qandaraaska: Adeegga taageerada waxaa la siin doonaa shaqooyinka cusbooneysiinta wadada
Adeeg taageero ayaa loo bixin doonaa howlaha dib u cusboonaysiinta wadada TR GENERAL DIRECTORATE OF STIL RAILWAYS (TCDD) 4. TAAGEERADA CAYMISKA MAAMULKA DIIWAAN-GALINTA SHAQAALAHA JIDKA SHAQAALAHA Soo iibinta Sharciga Soo-iibinta Dadweynaha 4734 [More ...]
Maanta taariikhda: 29 July 1896 Eskisehir-Konya Line (443 km) ayaa la dhameeyay.